पोखरामा विवेकशील साझाको संगठन विस्तार तथा प्रदेश सँयोजक घोषणा हुने • Ganthan News Pokhara
पोखरामा विवेकशील साझाको संगठन विस्तार तथा प्रदेश सँयोजक घोषणा हुने
गन्थनद्वारा Oct 25, 2018 मा प्रकाशित
पोखरा, ८ कात्तिक/ पोखरामा विवेकशील साझा पार्टीको संगठन विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुने भएको छ । विवेकशील साझाको देशव्यापी संगठन विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत पोखरामा जिल्ला कमिटिको सँयोजनमा प्रदेशस्तरिय यो कार्यक्रम हुन लागेको हो ।
कात्तिक ९ र १० गते हुन लागेको कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको विवेकशील साझा पार्टी जिल्ला कमिटि कास्कीले जनाएको छ ।
यो कार्यक्रमका लागि पार्टीका शिर्ष नेताहरु पोखरा आउने जिल्ला सचिवालयका सदस्य सुरेश पहारीले जानकारी दिए । सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार विवेकशील साझाका सँयोजकद्वय रविन्द्र मिश्र र उज्जवल थापा सहित केन्द्रीय नेताहरु केशव दाहाल, डा. सूर्यराज आचार्य, रञ्जु दर्शना लगाएत पोखरा आउने कार्यक्रम रहेको छ ।
कार्यक्रममा सँयोजकद्वय रविन्द्र मिश्र र उज्जवल थापाले विवेकशील साझाको राजनीतिक मूल्य र मान्यताको विषयमा आफ्ना धारणाहरु राख्नेछन् । त्यस्तै डा. सूर्यराज आचार्यले विवेकशिल साझा पार्टीको राजनीतिक दर्शन र अर्थतन्त्र विषयमा आफ्नो विचार राख्नेछन् ।
अर्का नेता केशव दाहालले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको औचित्यको बारेमा प्रकाश पार्नेछन् भने युवा नेतृ रञ्जु दर्शनाले युवा पुस्ता राजनीति र सामाजिक अभियानको विषयमा बोल्नेछन् ।
‘सेड्युल’अनुसार कात्तिक ९ गते शुक्रबार संगठन विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुनेछ भने कात्तिक १० गते शनिबार विवेकशील साझाको गण्डकी प्रदेश संयोजक घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सँयोजक घोषणाका लागि पार्टीले विशेष तयारी गरिरहेको छ ।
प्रदेश सँयोजक घोषणा कार्यक्रम पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा हुने सचिवालयले जानकारी दिएको छ । घोषण कार्यक्रममा सबै सर्वसाधारणहरुले सहभागिता जनाउन सक्नेछन् ।
तन्नेरी रोजाइमा पोखराको मेरो चित्र
पोखरामा कौडा खालबाट २ लाख सहित ८ जना पक्राउ
‘भ्रष्टाचार कहिलेसम्म ? जनता सचेत नभएसम्म’
पत्रकारलाई हतकडी लगाएर बन्दी ! यो कस्तो लोकतन्त्र ?- विवेकशील साझा
नयाँ बर्षमा विवेकशील साझाको चियापान, राजनीतिज्ञलाई योगको आवश्यक
भ्रष्टाचारका विवरण माग्र्दै विवेकशील अख्तियारमा
विवेकशील साझाको होलीः ‘सत्यको राजनीतिबाट जनताको मुहारमा खुशी ल्याउँछौँ’
राजनीतिक नेतृत्वकै कारण विकासले गति लिन सकेको छैनः डा. सूर्यराज आचार्य
विवेकशील साझाः जिल्लामा छैन फुटको असर
पत्रकारलाई हतकडी लगाएर बन्दी ! यो कस्तो लोकतन्त्र ?-…